नेपाली कथा Archives - Page 84 of 84 - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय | Page 84
~अजय दिक्षित ~ “ठूलोकान्छा, यसपालि त सतबीज छर्न पशुपतिनाथ लगिदे न है !” हजुरआमाले दोस्रोपटक नातिलाई पुकारिन् । हजुरआमाले कुरो गरेको बुझेपछि मोबाइल बन्द गर्दै ठूलोकान्छाले सोध्यो, “के भन्या आमा ?” “सतबीज छर्न लग्दे भन्या !” “ए भइहाल्छ नि, अघिल्लो दिन … Continue reading →
Posted in नेपाली कथा	| Tagged Ajay Dixit	| Leaveacomment
कथा : आमा बन्न नसक्नुको पिडा
~आचार्य प्रभा~ सीमा एक्लै कोठामा झोक्र्याएर बसिरहेकी थिई। अनायस अर्को कोठाको हाँसो र कोलाहलले झस्किइ अनि जुरुक्क उठेर नियाली । उसको लोग्ने छोराछोरीहरूसँग बच्चा झैँ जिस्किएर खेलिरहेका थिए। मानौ ऊ पनि दस, बाह्र बर्षको बालक हो र ऊ आफ्नो सन्तुष्टी … Continue reading →
Posted in नेपाली कथा	| Tagged Acharya Prabha	| Leaveacomment
कथा : स्वार्थी चाहाना
~आचार्य प्रभा~ कान्छी छोरीको विवाह हुन नसकेकोमा उनी असाध्यै चिन्तित थिइन् । हुन पनि त हो, उमेर पुगिसक्दा समेत कुनै केटोले फर्केर नहेर्नु, माग्नसम्म न आउनु कुनै पनि आमाको लागि चिन्ताको बिषय नै बन्छ । एकदिन उनी दलानमा बसेर छोरीसँग … Continue reading →
कथा : दुखेको रात
~अभिमन्यु निरवी~ पहाडको बाटो, हिँड्दाहिँड्दै झ्मक्क भयो। आकाशमा जून पनि खुलिसकेको थिएन। चिसो हावासँगै झयाउँकिरीको एकोहोरो आवाजले वातावरण गुञ्जायमान थियो। निकै उकालो चढिसकेपछि पर एउटा गाउँ देखियो। सन्तुष्टिको लामो सास फेरेर म त्यतैतिर हिँडें। गाउँ नजिकै पुग्दा विस्तारै मानिसहरूको आवाज
Posted in नेपाली कथा	| Tagged अभिमन्यु निरवी - Abhimanyu Nirabi	| Leaveacomment
कथा : साँघु
~अभिमन्यु निरवी~ विवाहको दिन ऊ निराश देखिएकी थिई । गरगहना, रातो सारी, झिलमिल सितारा जडिएको घुम्टो ओढेर पनि ऊ खुलेकी थिइन । के के नपुगे जस्तो, कताकता के बिगि्रए जस्तो विवाहको वातावरण खल्लो खल्लो थियो उसको लागि । मनमा केवल … Continue reading →
कथा : चर्या तिन आमाका
~राशि पाण्डे~ एक उनी गत तिन महिनादेखि थलापरेकी थिइन् । जिउ सुकेर हाड छाला मात्र थियो । तर आँखा चहकिला रबोली प्रस्ट । माघकोे महिना, औँसीको चिसो रात । आकाशमा डम्म बादल लागेर पानी पर्लापर्ला जस्तोमौसम । वास्तवमा उनी मृत्युशय्यामा थिइन् । उनी आफ्नो विगतमा पुगिन्
कथा : दिल्लीकट लाहुरे
~राशि पाण्डे~ होटलमा खाना खाइरहेकी छु । एउटा लामो फल्याकमा दुईतिरबाट काठको किल्लाले अड््याएर टेबुल जस्तोबनाइएको छ । टुकीको मधुरो उज्यालामा मानिसका अनुहारहरू धूमिल देखिएका छन् । साझाको चामलह्वास्स गन्हाउँछ । म नरुचाइ नरुचाइ पेटसम्म भर्ने जुक्ति गरिरहेकी हुन्छु । कोठाभरि सल्लाको धुवाँ,रक्सीको गन्ध र गफका चोक्टाहरू सगबगाइरहेका छन् ।
कथा : बलात्कारी वटवृक्ष
~राशि पाण्डे~ धेरै दिनपछि षोडशी माइत जान हिँडेकी थिई । लोग्ने लाहुर गएको पनि छ वर्ष भइसकेको थियो । घरमासासूससुरा बाहेक अरू कोही थिएनन् । मध्यान्हको करिब दुई बजेको होला ? ठाडो उकालो । उनलाई थकाइलाग्यो । ऊ सुस्ताउन लागी । चौतारीमा बसेर, बिसाउन लागी । झ््याम्म परेको बरको रूख । हाँगाबाट निस्केका वायवीय जराहरू हात्तीका सुँढ समान यतायता झुलिरहेका। सरर्र बतास चल्यो । उसको भित्रसम्म शीतलताले छायो ।
कथा : सिङ्गथाजी
~राशि पाण्डे~ अनि नीमा चरचरी बाझ्न लागी । फोहर फोहर शब्दले सराप्न थाली । धेरै दिनदेखि गुम्स्याएरराखेको रिस आज पोखियो । उसका पीडाहरू, आक्रोशहरू गाली भएर निस्किन लागे । मिङमरले होटलमा चासो लिन छाडिसकेको थियो । ऊ दिनभरि रक्सीमा टिल्ल … Continue reading →
कथा : आइमाई गिद्ध
~राशि पाण्डे~ सम्पूर्ण व्यथालाई अाँखामा समेटेर प्रसववेदनाले भैँसी उठबस गरिरहेको छ । केटाकेटीहरू भैँसीलाईचारैतिरबाट घेरेर रमिता हेरिरहेका छन् । घरभरि खुसी छाएको छ । के ब्याउने हो ? घरधनीबुढी कुँडो पकाउँदै गुनिरहेकी छिन् । पाडो पाई भने त के काम … Continue reading →
कथा : देउकी
~राशि पाण्डे~ हिँडाइको क्रममा जब तपाईंं कुनै अक्करको चुचुरोमा पुगेर एकछिन सुस्ताउँदै आफूले हिँडेकापाइतालाका डोबहरू पछ््याउनु हुन्छ, आफ्नो वरपरका दृश्यहरूमा विहङ्गम दृष्टिपात गर्नुहुन्छ । कहालीलागेर आउँछ, अत्यास लागेर आउँछ, त्यस्तो बाटो कसरी हिँड्न सकियो होला ? पाइलाका गोरेटाहरूमाउकाली ओह्राली आइ नै रहन्छन्, भिर टाकुरा, फाँटहरू परी नै रहन्छन्, तर जीवनको गोरेटामा त उकालीमात्र छ, चढाइ मात्र छ । गन्तव्य कहाँ छ ? थाहा छैन, केवल अनिश्चित दिशातर्फ हिँड्नु छ, मात्र हिँड्नु ।हामी सबै व्यस्त छौँ अदृश्य टाकुराको चढाइमा, क्षितिजमा धुमलिएको बिन्दुतिर ……..
कथा : आनी
~राशि पाण्डे~ – ताशी देलेह१ ? – खे राङ कुसुडेपो यिन पे२, खोलापारिबाट ठुलो आवाजमा मानिसहरू कराइरहेका थिए । – ल्या यिन ३ !” खोलावारिबाट रुन्चे जवाफ आइरहेको थियो । “खेला छेपा–गी४, ल्होछारको बेला तातोपानीमा लाग्ने परम्परागत जात्रामा विशेषरूपमा आनी, … Continue reading →
कथा : हराएको एउटा मान्छे
Posted on August 14, 2013 by Sahitya - sangrahalaya
~रजित ओझा~ उ दिनहुँ देखिन्थ्यो। केहि वरवराइरहन्थ्यो। उ वसेको कुर्सीमा सामान्यतय एक्लै हुन्थ्यो। शायद उ आफैँ सँग कुरा गर्थ्यो। आफैँ सँग कुरा गर्नेहरुको सवै भन्दा फाइदा एकान्त मा पनि त उ एक्लो हुँदैनथ्यो किनकी उ भित्रै उसको सन्सार हुन्थ्यो।वोली पनि … Continue reading →